के फोटो प्रतियोगिता यस वर्षको वन्यजन्तु फोटोग्राफर जित्यो?
लन्डन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, धेरै विचार पछि, आफ्नो वार्षिक प्रतियोगिता 52 वन्यजन्तु फोटोग्राफर को विजेता घोषणा। यो फोटोग्राफर लगियो 95 देशका लगभग 50 हजार तस्वीर उपस्थित थियो। यो प्रकृति यति राम्रो कहिल्यै प्रदर्शित गरिएको छ भने छ।
अन्तिम राउन्ड लागि मात्र 100 फोटो चयन गरिएको, तर केवल केही विजेता हुन सक्छ, र आफ्नो विकल्प आयोजकहरु लागि वास्तविक चुनौती भएको छ।
लन्डन Maykl Dikson को संग्रहालय को निर्देशक यसो भन्नुभयो: "विजेता तस्बिरहरू हाम्रो हृदय छोयो र तिनीहरू प्राकृतिक संसारको बारेमा फरक फरक सोच्न बाध्य छन्।"
यो प्रदर्शनी 21 अक्टोबर मा खुलेको छ। तपाईं लण्डन उनको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। यसलाई विश्वभरिका यात्रा हुनेछ जब तपाईं पकड गर्न सक्छन् भनेर प्रदर्शनी, सबै छ महादेशमा मा देखाइनेछ।
के तपाईं पनि विजय पाउन योग्यका कि वन्यजन्तु को फोटो गरिरहेका छन् कि विचार? अक्टोबर 24 देखि, तपाईं अर्को वर्ष प्रतियोगिता मा भाग लिन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
टिम Laman, संयुक्त राज्य अमेरिका - निरपेक्ष विजेता।
ओराङ्उटन, जसको फारम एक महत्वपूर्ण स्थिति (Endangered) मा छ, बाक्लो मूल strangler नेभाराको, 30 मीटर को एक उचाइ मा रूख वरिपरि नै र्याप जो clings। यस विशेष प्राणी राष्ट्रिय पार्क Ganung-Palung को ट्रपिकल वन देख्न थियो - जहाँ orangutans यो सुरक्षा अन्तर्गत छन् इन्डोनेशिया मा केही स्थानहरू मध्ये एक।
यो मुद्दहरुलाई आफ्नो खतरनाक आरोहण समयमा यो स्थान फोटोग्राफर बायाँ गरिएको थियो जो कोठामा, थियो। फोटो र प्राविधिक अर्थमा को प्रतीकात्मक रूप दिइएको, एक यो प्रतियोगिता निरपेक्ष विजेता भएको छ किन बुझ्न सक्नुहुन्छ।
"चन्द्रमा र काग"
गिदोनले Nayt, संयुक्त राज्य - युवा वन्यजन्तु फोटोग्राफर को विजेता।
काग पूर्ण चन्द्र पृष्ठभूमि विरुद्ध वास्तविक अलौकिक जा देखिन्छ। तस्वीर Valentines पार्क मा आफ्नो लन्डन घर बाहिर लिएको 16 वर्षीया फोटोग्राफर। यो रात दृश्य रूपमा फोटोग्राफर द्वारा वर्णन "एक परी कथा को बाहिर केहि।" Lyuis Blekvell, को न्यायपीठ को अध्यक्ष, "फोटो एक कविता सिर्जना गर्न सक्छ भने, यो तरिका हुन भएको थियो।" भनेर भन्नुभयो
गणेश शंकर, भारत - नामांकन मा विजेता "चराहरूले।"
बङ्गाल मनिटर गुँड केही गुलाब घेरा भारत parakeets भित्र प्राप्त गर्न प्रयास। हामी निर्धक्क भई गुँड को मालिक खुसी छैनन् भनेर भन्न सकिन्छ। तिनीहरूले पुच्छर bugger क्षति र यो एकछिन पर्ख गर्न थाले पछि, खराब छेपारो हटाउनुहोस् थियो। त्यो आफ्नो प्रस्ताव पूर्ण इन्कार हुनत, सक्छ र बिजुली गति संग सर्वोच्चता लागि संघर्ष अर्को दुई दिन भन्दा धेरै पटक दोहोर्याइएको थियो।
Valter Binotto, भारत - श्रेणी को विजेता "वनस्पति र Fungi।"
यो एउटा ठूलो र विस्तृत हेजेल रंग नजिक-अप छ। फोटो मा तपाईं उदाहरण, पुरुष र महिला फूल लागि, अविश्वसनीय विस्तार देख्न सक्छौं। उत्तरार्द्ध कली रातो tuft संग संरचना जस्तै साना छन्। प्रत्येक बाली (त्यसैले यी लामो संरचना भनिन्छ) त्यसपछि हावा द्वारा लगे छ जो वर्ष, को सुरुमा पराग को एक भारी रकम विज्ञप्ति, तर नयाँ अनुसन्धान कि मौरीले पनि pollination को प्रक्रिया मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह देखाउँछ।
"को गल्ली मा बिरालो"
Nayan Hanolkar, भारत - नामांकन मा विजेता "शहर।"
चितुवा मनमनै मुम्बई छेउछाउको को alleys मा glides। मान्छे मा धेरै अनियमित आक्रमण भए तापनि यी जंगली बिरालोहरु व्यापक दिन-को दिन यहाँ बस्ने रूपमा स्वीकार र, ज्यादातर आवारा कुकुर खोजी खाना को खोज मा सडकमा घुमफिर छन्।
"को उल्लू लागि Requiem"
मैट Andersson, स्वीडेन - श्रेणी "कालो र सेतो" मा विजेता।
यो फोटो फोटोग्राफर एक आकर्षक यूरेशियन pygmy Owls देखे जहाँ स्वीडेन, को दक्षिणी वन मा लगियो। तिनीहरूलाई प्रत्येक बल्लतल्ल 19 सेन्टिमिटर छ। एक रात उहाँले Owls एक उनको साथी एक को शाखा मा रहेका बेला, भुइँमा मृत राख्नु, किरण को पहिलो प्रकाश रोशनी हामीले देख्यौं। यो फोटो लिएको थियो शीघ्र पछि जीवित उल्लू पनि मृत्यु भएको थियो, आफ्नो क्षेत्रमा कसैले साझेदारी गर्न चाहने भएन शायद ठूलो चरा।
Toni दर्शनों, संयुक्त राज्य अमेरिका - श्रेणी को विजेता "अन्डरवाटर विश्व।"
हजारौं पश्चिमी प्रशान्त महासागर मा हरेक महिना केही दिनमा, पलाउ टापु नजिकै, spawn गर्न अड्डा भेला हुन्छन्। यो हरेक पूर्ण चन्द्र समयमा हुन्छ। आफ्नो maelstrom छिटो र क्रोधित देखिन्छ, तर यो लडाई पनि आशा खान मा शिकारीहरु द्वारा सामेल छ।
पछि त धेरै प्रयास असफल भयो उहाँले गलत अन्डा मा बादल को एक पृष्ठभूमि बिहान हल्का मा spawning समयमा माछा को गतिशील चाप कब्जा गर्न व्यवस्थित किनभने चित्र, धेरै भाग्यमानी छन्।
"बालुवा को क्यानभास"
रुडी सेबस्टियन, जर्मनी - को "विवरण" को विजेता।
ब्राजिलमा सेतो बालुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज रंगीन जीवाणुहरु द्वारा आएको यस brightest र सबै भन्दा अल्पकालिक lagoons देखि उहाँलाई पतन कि पानी, को लागि एक खाली क्यानभास बन्नेछ। फोटोग्राफर दुई वर्ष, फोटो लिन सही क्षण गरे। उहाँले यस अविश्वसनीय दृश्य भन्दा उड्यो, र यो उहाँको अविश्वसनीय फोटोहरू प्राप्त मदत गरे।
लुइस Sandoval, मेक्सिको - श्रेणी मा विजेता "छाप।"
खाजिनिति गर्ने जवान क्यालिफोर्निया समुद्र सिंह Espiritu सान्टो को द्वीप को पानी मा देखियो। तिनीहरूलाई को एक तारे माछा फेला र पछाडि र अघि बढ र आफ्नो शिकार प्रविधी honing, एक फ्रिसबी रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे।
"को छेपारो लागि जेल"
पावलले हिल्टन, संयुक्त राज्य र अष्ट्रेलिया - श्रेणी एकल छवि Photojournalist मा विजेता।
भयंकर दृश्य यो फोटोग्राफर द्वारा स्तब्ध4हजार छेपारो defrost। यी Sunda pangolins तिनीहरूले परम्परागत चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ जहाँ चीन र भियतनाम, पठाइयो। तिनीहरूले प्रकृति को संरक्षण को लागि विश्व समाज र इन्डोनेसियाली अधिकारीहरु द्वारा एक संयुक्त सञ्चालन धन्यवाद पाउन व्यवस्थित।
छेपारो स्थिर माछा को एक तहको लागि एक ढुवानी कन्टेनर फेला पर्यो। 96 छेपारो, बच्न, व्यवस्थित छन्, जो पुनःस्थापित र Rainforest फिर्ता जारी रहेको छ। यो छेपारो हालै मतदान कि 182 देशहरूमा लागि सुरक्षा को उच्चतम स्तर प्रदान गरिएको छ। यो यसको लागि मांग गायब हुनेछ गर्दा मात्र बन्द हुनेछ जो एक विशाल व्यापार, छ - तर फोटोग्राफर वन्यजन्तु विरुद्ध अपराधको, भन्नुभयो।
के सामान्य reportage फोटोग्राफी फोटो शूट फरक छ
गर्भवती महिला लागि लोकप्रिय विचारहरू फोटो शूट
एक बच्चाको लागि Photobook - एउटै एल्बममा आफ्नो बाल्यकाल
फोटोग्राफी लागि reflector कसरी प्रयोग गर्ने?
TPO एंटीबडी र हर्मोन सिस्टम मा आफ्नो प्रभाव
दर्जा बाइक: शीर्ष 10
सनी पर्दे - यो थकित प्राप्त गर्न असम्भव छ, जो एक क्लासिक
सिस्टम आवश्यकताहरु पीसी मा कुकुर हेर्नुहोस्
शो बारे सुविधा र रोचक तथ्य: को "हिड्ने मृत" कसरी हटाउने
कोड p0420 टोयोटा त्रुटिहरू, फोर्ड र अन्य कार